झर्रोटर्रो : ‘प्रभु महाराज’का दूतको साक्षात् दर्शन – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
झर्रोटर्रो : ‘प्रभु महाराज’का दूतको साक्षात् दर्शन
गएको हप्ता बिहीबार नेपाल मण्डलमा गुज्जर ‘प्रभु महाराज’का मुलुकबाट ‘प्रभु महाराज’ले आफ्ना दूत शुष्मा बहनजीलाई पठाए । दूत नेपाल मण्डलमा आएर ‘सोल्टी’ नामको मठमा बसेर नेपाल मण्डलका आफ्ना भक्तजनहरूलाई साक्षात् दर्शन दिइन् । निकट भविश्यमा सत्तारोहण गर्न थालेका सूर्यछाप दलका आफ्ना प्रिय भक्त अनुज श्री उखानप्रसाद, उनका सहयोगी गोलघेरे दलका मिस्टर सुप्रिमो, मधेशतिरका भक्तहरूलगायत सत्ता सञ्चालन गरिरहेका चारतारे दलका मिस्टर डेउडापतिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्शनभेट दिइन् । त्यसैगरि ‘प्रभु महाराज’का दूत शुष्मा बहनले नेपाल मण्डलका राष्ट्रप्रमुख आधापति महोदयलाई उनकै कुटीमा गएर दर्शन दिइन् । मिस्टर डेउडापति र आधापति महोदयलाई उनीहरूकै कुटीमा दर्शन् दिन जानु पर्दा दूतको थोरै मान मर्दन् त भयो तर यो वाध्यता थियो भन्ने कुरामा बहनजीले चित्त प्रशन्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । वास्तवमा डेउडापति र आधापति पनि भक्त नै थिए तर उनीहरूलाई आफैले लालमोहर लगाएको कानूनको त्यान्द्रोले बाँधेको हुनाले मरिच चाम्रिएझैँ चाम्रिएर कुटीमै दूतलाई बोलाएर भेटे । २४ घण्टासम्म नेपाल मण्डलमा पादार्पण गरेर आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिई दूत आफ्नो मण्डलतिर फर्किइन् ।
‘प्रभु महाराज’का दूतको दर्शनभेट गर्न भक्तहरू पालैपालो सोल्टी मठमा पूmलमाला, पुष्प गुच्छा र बुकी लिएर हस्याङपस्याङ गर्दै आआफ्ना दलबलसहित गए । नेपाल मण्डलमा चुनाउको खेतीपाती चलिरहेको मौसममा ‘प्रभु महाराज’ले दूतमार्फत् दर्शन दिएपछि भक्तहरू हर्षले प्रफुल्लित हुँदै गदगद भए । उनीहरूले यो दर्शनभेटले आपूmहरू धन्य धन्य बनाएको, गच्छेअनुसारको आशिर्वाद प्राप्त गरेको र भेट निकै फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
यतिबेला नेपाल मण्डलमा चुनाउको अन्तिम खेती स्याहार्ने बेला भएको छ । यो खेती स्याहारेर सकिएपछि हसुर्ने साइतका लागि भक्तहरू संसदको खलोमा जुट्ने छन् । खलोबाट मुखिया कस्लाई चुन्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिन ‘प्रभु महाराज’ले दूत बनाएर शुष्मा बहनलाई पठाएका थिए । सरकारको मुखिया चुन्ने विषयमा यतिबेला नेपाल मण्डलमा विभिन्न टिकाटिप्पणी, छलफल र बहस चलिरहेको छ । सूर्यछाप दलले चुनाउमा धेरै मत पाएर पहिलो दल बनेको हुनाले आपूmले स्वतः मुखिया बनेर सरकार बनाउने अधिकार पाएको भनेर ढुक्क परेर बसेको छ । एक्लै मुखिया चुनिनलाई आवश्यक सङ्ख्याको जरुरत छ । त्यो सङ्ख्या कसरी परिपूर्ति गर्ने भनेर सूर्यछाप अलमलमा परिरहेको छ ।
सूर्यछापले चुनाउमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेर गोलघेरेलाई मिसाएर नेकपा साठी–चालिस गठन गरेको थियो । तर अहिले उसलाई चालिसे भागवाला गोलघेरेलाई साथै लिएर सरकारको बिलो हसुर्न जाने मन छैन । देश र प्रदेशको चुनाउमा चालिसे विलो दिएर गोलघेरेलाई मिसाए पनि अहिले हुन थालेको भत्तासभाको चुनाउ र प्रदेशको सरकारमा तीस भागको विलो मात्रै छुट्याएको छ । तीसभागे विलो लाउँदा पनि दुबैतिरका पाटीमा लुछाचुँडी परेर ङारङार ङुरङुर गरिरहेका छन् । अर्कातिर नेकपा साठि–चालिसले सरकार बनायो र पाटी एकता पनि ग¥यो भने चारतारे र मधेशका मठाधिसहरू सदाका लागि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि भनेर गुज्जर ‘प्रभु महाराज’को मुलुक आत्तिएको छ । छटपटिएको छ । त्यसैले उसले सूर्यछापलाई जे जसरी हुन्छ आफ्नो गोजीभित्रै राख्ने योजनामा छ । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन गुज्जर ‘प्रभु महाराज’ले दूत पठाएका हुन् ।
‘प्रभु महाराज’ले पठाएका दूत नेपाल मण्डलमा बिहीबार बेलुका आएर शुकबार बेलुका आफ्ना मुलुकतिर फिर्ता भइन् । उनी फर्के लगत्तै नेपाल मण्डलमा विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । अखबारहरूले भँगेरा टाउके अक्षरमा समाचार र टिकाटिप्पणी छापे । फेसबुक र ट्वीटरका भित्ता रङ्गिइरहेका छन् । उनको आगमनको फाइदा बेफाइदाका बारेमा चर्चा भइरहेका छन् । कसै कसैले उनको आगमनको औचित्य र निम्तो बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । यस बारेमा यो कैलुब्राहले पनि भक्तहरूलाई भेटेर के कस्तो आशिर्वाद प्राप्त भयो ? के कति कारणले र कस्को निम्तोमा आइन् भन्ने विषयमा दूतसँग भेट गरेका भक्तहरूलाई जिज्ञासा राख्यो ।
सर्व प्रथम मधेशी भक्तहरूलाई भेटेर यो जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले सामुहिकरूपमा जवाफ दिए । उनीहरूले भने ‘प्रभुका दूत हाम्रो मुलुकमा आउनलाई कुनै साइत हेर्न, कसैको इजाजत लिन, घोषणा गरेर आउनु पर्दैन । हामी भक्तजनलाई आशिर्वाद दिन, निर्देशन दिन जतिवेला पनि आउन सक्छन् । यसमा केको आपत्ती ?’ अनि यो दर्शनभेटबाट नेपाल मण्डलले के कति फाइदा पायो त भन्ने पश्नको जवाफमा उनीहरूले भने ‘प्रभुले दिने फल तुरुन्तै मिल्ने हो ? नेपाल मण्डललाई किन चाहियो फाइदा ? यो त हामी भक्तहरूको मामिलाको कुरो हो ।’
यही प्रश्नको जबाफ गोलघेरेका मिस्टर सुप्रिमोलाई सोध्दा उनले भने ‘मने प्रभु महाराज र उहाँका दूत हाम्रा घरतिर आउन कुनै छेकबार छैन । प्रभुलाई जतिबेला आवश्यता पर्छ त्यतिबेला आउनुहुन्छ वा प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ । प्रभु र हाम्रा बिचमा मने रोटीबेटीको सम्वन्ध छ । यसबारेमा टिकाटिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ।’ तपाइँहरू पर्धानमन्त्री भइसकेका मान्छे दूतलाई भेट्न दलबल लिएर किनको उनकै वासमा गएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने ‘मने प्रभु महाराजका हामी भक्त भएकाले हामी भन्दा उनीहरू ठूला हुन् । हामी अनुज हौँ । यो परापूर्वकालदेखि चलेको नियम हो । जहाँसम्म फाइदाको कुरो छ, त्यो त धेरै ठूलो उपलब्धी भएको छ भन्ने म ठान्चु । विगतमा हामी आफैँ प्रभुको दर्शन गर्न र आशिर्वाद थाप्न उनकै मण्डलतिर जान्थ्यौँ, यतिवेला प्रभुले दूत पठाएर हामीलाई धन्य बनाउनु भएको छ ।’
दूतलाई भेट्न आफ्नो मर्यादक्रम तोडेर उनकै बासस्थानमा गएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सूर्यछाप दलका मुखिया उखानप्रसादले भने ‘काम नपाएकाहरूले हल्ला बखेडा गरेर बस्छन् । प्रभु र भक्तका बिचमा यसरी साक्षात हुँदा कसैलाई टाउको दुखाउनु पर्ने किन ? प्रभुले जस्लाई महत्व दिनुहुन्च उसैले भेट्ने हो । जहाँसम्म मर्यादाको कुरा छ त्यो त हामी भेट्नेलाई कुनै अप्ठेरो लागेको छैन भने अरूले यसमा यसो गरो उसो गरो भनेर समय किन खेर फाल्नु ? खुरुखुरु आफ्नो जे धन्दा हो त्यही गरे भैगो नि । मर्यादाको नापो गर्नेहरू थुपुक्क बसे भैगो । तिनलाई जाऊ तिमी पनि भेट भनेर हामीले त भन्या छैनौँ ।’ दूत किन र कस्ले बोलाएर आइन् भन्ने विषयमा बाहिर निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ भन्दा उनले भने ‘प्रभु महाराजलाई मैले भनेको हुँ । मैले बोलाएको हो । सरकार बनाउँदा प्रभुको आशिर्वाद चाहिने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ । अघिल्लो पटक प्रभु रिसाइबक्सेर नाकाबन्दी लगाएका बेला मैले यत्रै पनि टेरिन । त्यसले हाम्रा बिचमा राम्रो परेको थिएन । त्यै भएर चुनाउमा रैतीले हामीलाई सरकार बनाउने अधिकार दिँदा पनि डेउडापतिले सरकार नछोडेर टाँस्सिएको टिाँस्सियै छन् । उनलाई भनसुन गरेर छिटो छोड भन्न लगाउनु थियो । अर्को कुरा म आफै पनि उतै जाने थिएँ, म उता गएको भए लौ उखानप्रसाद पनि उतै लम्पसार परो भनेर ढोल पिट्दै हिँड्ने थिए । यतै बोलाएर भेटेपछि त लम्पसार परेको कुरा भएन नि । हाम्रो आदेशमा प्रभु हिँडे नि त । तेस्रो कुरा चुनाउमा गोलघेरेले चारतारेसँग तीस प्रतिशत माग्दा पनि नपत्याएर उछिट्टिएर मलिन अनुहार लाएर हामीकहाँ भिक्षा माग्न आएका गोलघेरे दलका सुप्रिमोलाई हामीले चालीस प्रतिशतको विलो दिएर गुन लगायौँ । तर अहिले उनले पाटी एकाता छिटो गरौँ भनेर हैरान परेसान पारेका छन् । कि मलाई पाटी मुखिया चाइयो कि सरकारको मुखिया चाइयो भनेर भालुको कम्पारो भा’छन् । कुनै अडान पनि नभएको पाङभुङेलाई एकतामा ल्याएर मैले आफ्नो पाटी भताभुङ्ङ पार्नु छैन । त्यसैले उनलाई पनि थान्कोमान्को लाइदिनु परो भनेर भन्नलाई बोलाको हो । अब सरकार बनेपछि एकतासेकता गरे पनि गरौँला भनेर कुरो टुङ्ग्या छ ।’
यसरी प्रभुका दूत आएको गएको विषयमा तथ्य कुरो बाहिर आयो । सूर्यछापका मुखिया उखानप्रसाद साँच्चै राष्ट्रवादी अडान भएकै नेता रैछन् । प्रभुलाई समेत झुकाएर दूत आफ्नै मुलुकमा झिकाई छाडे । अब त सरकार बनाउन प्रभुकै मण्डलमा धाउनु त परेन नि । उखानप्रसादको जय होस् ।
‘नेताहरु नै माफिया’ डा. के.सी.
काठमाडौं, असार ९ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र...
Jiwan saili, Tippani Bislesion Read More